खसी बोकाको मासूको नयाँ मूल्य निर्धारण : अब प्रतिकेजी ५ सय रुपैयाँ ! « गोर्खाली खबर डटकम
दाङ । दशैं तिहारलाई मध्यनजर गर्दै जिउँदो खसीबोकाको खरिद मूल्य निर्धारण गरिएको छ।
दाङको लमही नगरपालिका वडा नं. ९ स्थित कर्मठ सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्था लिमिटेडमा आइतबार बसेको सरोकारवालाहरुको बैठकले जिउँदो खसी बोकाको खरिद मूल्य निर्धारण गरेको हो।
किसान, व्यवसायी, स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि, सहकारीका पदाधिकारीको बैठकले २० देखि २४ केजी सम्मको खसीको जिउँदो मूल्य प्रतिकिलो ५ सय रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ।
त्यस्तै २० देखि २९ केजी सम्मको खसीलाई प्रतिकेजी ५ सय २५ र ३० केजी भन्दा बढी तौलको खसीलाई ५ सय ३० का दरले खरिद मूल्य तोकेको छ।